अख्तियारमा लान चोलेन्द्र श्रीमान् किन आतुर ? – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
| प्रकासित मिति : २२ पुस २०७७, बुधबार ०५:५८
संवैधानिक परिषद्को विवादास्पद पछिल्लो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र प्रधानमन्त्रीबीच आ–आफ्ना स्वार्थको मेल भएको छ । राणाले आफ्नो मान्छे भन्दै बहालरत न्यायाधीशलाई अख्तियारको आयुक्तमा घुसार्नुको गुह्य कुरोलाई अहिले त्यही आशंकासँग जोडेर हेरिएको छ ।
०४७ सालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई अवकाशपछि पनि आयोगले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्दैनथ्यो । बहाल हुँदा अहिलेझैँ न्यायपरिषद्ले नै सबै आरोपको हल्का छानबिन र सामान्य निरूपण गथ्र्यो । तर, अवकाशपछि न आयोग न न्यायपरिषद् कसैले पनि छुँदैनथ्यो ।
नयाँ संविधानमा भने न्यायाधीशहरू घर गइसकेपछि अख्तियारले छानबिन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा उक्त व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थालाई हेर्दै श्रीमान्ले के ठानेको हुन सक्छ भने अवकाशपछि अख्तियारले आफूमाथि कुनै कारणमा छानबिन अगाडि बढायो भने के गर्ने ? यदि डर अख्तियारको हुन्थ्यो भने न्यायाधीशको हकमा किन लोकसेवा या निर्वाचन आयोग ताकिएन ?
कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुखबीच यदि यो हदसम्मको सहमति भएको हो भने निकै डरलाग्दो अवस्थाको संकेत मान्न सकिन्छ । त्यसैको सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पोलिटिकल इस्यु भन्न थाल्नु र अदालतले पनि त्यही भाषा बोल्यो भने बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुको संयोग मात्र त नहोला !
हालै अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस गरिएका किशोर सिलवाल उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश हुन् । एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायाधीश एकाएक किन आयोगमा जान तयार भए ? अनि कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायाधीशलाई नै आयोगमा लैजान प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश किन आतुर भए ? आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितहरू धमाधम धरौटीमा छुटे, बस्न्यातलाई थुना।
निर्वाचन आयोगका सहसचिवको सरुवा कानुनविपरीत ! २२ पुस २०७७, बुधबार ०५:५८
चोरको आँखा पल्सरमा स् काठमाडौँमा दैनिक ४–५ वटा मोटरसाइकल चोरी ! २२ पुस २०७७, बुधबार ०५:५८
सीमा विवादबारे छलफल गर्न भारत अनिच्छुक २२ पुस २०७७, बुधबार ०५:५८
बजारमा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि ! २२ पुस २०७७, बुधबार ०५:५८
सरकारसँग वार्ताको तयारी चल्दै गर्दा एकाएक समातिए विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता बास्तोला। २२ पुस २०७७, बुधबार ०५:५८
पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीको अवसरमा झाँकी सहितको पदयात्रा २२ पुस २०७७, बुधबार ०५:५८
टिम नेपो चितवनले दियो भरतपुर कारागारलाई ८०८ थान पुस्तक। २२ पुस २०७७, बुधबार ०५:५८
अमेरिकामा आपत् : विश्व जगतले गर्‍यो भत्सर्ना, बाइडेनको जित आधिकारिक २२ पुस २०७७, बुधबार ०५:५८
भारतमा देखियो बर्ड फ्लू, दक्षिणी नाकामा कडाई ! २२ पुस २०७७, बुधबार ०५:५८
अख्तियारमा लान चोलेन्द्र श्रीमान् किन आतुर ? २२ पुस २०७७, बुधबार ०५:५८
ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितहरू धमाधम धरौटीमा छुटे, बस्न्यातलाई थुना। २२ पुस २०७७, बुधबार ०५:५८
वैशाखमा चुनाव नभए ओली संकटकाल लगाउने तयारीमा १ २२ पुस २०७७, बुधबार ०५:५८